Kunopindirana yokugezera: dzingangoitika iri netariro
With kukurumidza kukura youpfumi China uye kuwedzera musika kudiwa, vatorwa utsanana vazviziva pezvitsiga vave akapindawo mumba kumusika, uye ivo vakabva vati nangananga zvipfuwo mukuru-mugumo musika. In chiso zvokunze makwikwi, China utsanana vazviziva emakambani kutsvaka imwe nzira kutanga kufunga sei kuumba nzira yokubuda.
Kuwedzera wokumwe utsanana vazviziva pezvitsiga nechisimba yenyika pezvitsiga
Atarisana dambudziko chabva kukwikwidzirana wokumwe utsanana vazviziva mavanga, international utsanana vazviziva pezvitsiga rokutanga-weDanho maguta China vakatanga kunzwa coolness uye vakafunga nezvenyu mumisika wechipiri newechitatu-weDanho. Uyezve, vanokurumidza vakatanga kuzoumba runoenzanirana yokutengesa uye rokutengesa nzira kuitira kuti yomuzana mutsetse musika havana kurasa, apo kuwedzera pamusika mugove kumisika wechipiri newechitatu-weDanho.
Zvisinei, murau uye kuzvidzora mitemo pamusoro China Real Estate pamusika zvakatungamirira kuti chichiitwa rutapudzo mukuru-mugumo Real Estate zvakadai dzimba, uye kushaya rokutengesa mukuru-mugumo vezvokutengeserana dzimba mune vomuzana uye yechipiri-weDanho maguta, saka achikakata pasi mukuru-mugumo utsanana vazviziva pamusika uye kukonzera kwachiri ichipera. Parizvino, zvipfuwo rinozivikanwa musha kuvandudza pezvitsiga kunge intercepted mukuru-mugumo utsanana vazviziva musika, iro rine zvakarwadza chaizvo dzakawanda utsanana vazviziva mavanga.
Panguva iyoyowo, pamwe kukurumidza kukura China utsanana vazviziva maindasitiri, mave akakurumbira mudzimba pezvitsiga akadai Wrigley building uye Jiu Mu. Vazhinji mukuru-kuguma Hotels uye Hotels vakatanga kukanda hydrangea kune epamba mavanga pamwe yepamusoro uye vakaderera mutengo. Kuwedzera pezvitsiga yenyika yava kubirwa wacho yokusafa chinzvimbo dzakawanda utsanana vazviziva mavanga.
Post nguva: Jan-18-2019